August 2010 ~ brazesh
महात्मा र बिच्छी
August 29, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
एउटा पुरानो उखान छ, 'जब पर्‍यो राती तब बूढी ताती।' यो उखान बनाउने मानिस पक्कै पनि अत्यन्त दूरदर्शी हुनुपर्छ। किनभने, हाम्रो आनीबानी र आचरणसँग यो उखान आज पनि असाध्यै धेरै समयसापेक्ष छ। कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, हामी किन कुनै पनि कुरालाई समयको सीमामा बाँध्न सक्दैनौँ ? तोकिएको समयमा हामी किन केही पनि काम फत्ते गर्न नसक्ने भएका हौँ कुन्नि ! समय भन्ने कुरा सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ र त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सानै बेलादेखि घोक्ने गर्छौं। तर, व्यवहारमा हामीमध्ये धेरै कम मात्र यसलाई लागू गर्छौं। समयलाई हेप्ने, वास्ता नगर्ने र त्यससँग नहिँड्ने हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार भइसकेको छ। व्यक्तिगत, औपचारकि, व्यावसायिक, सामाजिक र राजनीतिक कुनै पनि कुरामा कसैले पनि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली समय भन्ने कुरालाई लाप्पा खुवाएर हिँड्ने हाम्रो चरत्रि बनिसकेको छ।
समयका बारेमा हाम्रा आफ्नै मूल्य र मान्यताहरू छन्। कुनै बिहे-व्रतबन्ध वा भोजभतेरको निम्तोमा ६ बजे समय तोकिएको छ भने हामी साढे ७ बजेतिर पुग्नुपर्छ भनेर योजना बनाउँछौँ। यसका पछाडिको कारण के हुन्छ भने, खानै नपाएको जस्तो भनेको समयमा ठ्याक्क पुग्नु हुँदैन। खान पाउनु र नपाउनु भन्ने कुरा समयमा हिँड्नुसँग कसरी र किन गाँसिएको हो, भगवान् नै जानून्। त्यसबाहेक पनि कुनै काम, समारोह वा भेटका लागि ठीक समयमा कहीँ पुग्यो भने आफू काम नभएको र फुर्सद भएको प्रमाणित भइन्छ भनेर पनि अलमल गर्ने हाम्रो संस्कार छ। व्यस्त हुनु, काम हुनु र समयमा नहिँड्नु फरक कुरा हो भनेर हामी बुझ्दैनौँ। जो जति ढिला कतै पुग्छ, त्यो त्यति नै ठूलो भीआईपीमा गनिन्छ। अहिले त काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थालाई दोष लगाएर उम्कन पनि साह्रै सजिलो छ। बाटो जता पनि जाम हुन्छ भन्ने मान्छेहरूले त्यो जामको पनि हिसाब गरेर हिँड्न जानेका हुँदैनन्।
संसारका कुनै पनि विकसित राष्ट्र, सफल मान्छे र ठूला उपलब्धिहरूका पछाडि एउटै मात्र समान कुरा के हो भनेर खोतल्ने हो भने थाहा हुन्छ, समयको महत्त्व। प्रकृतिले कुनै पनि कुनाका कुनै पनि मान्छेलाई पक्षपात नगरी एकनासले बाँडेर दिएको सायद यही नै एउटा कुरा होला, समय। हरेक मानिसका वर्षमा १२ महिना हुन्छन्, हरेक मान्छेका महिनामा ३० दिन नै हुन्छन्, हरेक दिनमा २४ घन्टा नै हुन्छन्, हरेक घन्टामा ६० मिनेट र मिनेटमा ६० नै सेकेन्ड हुन्छन्। तर पनि केही मान्छेहरू आफ्ना लागि समय नपुगेको बहाना बनाएर आफ्ना असफलतालाई छोप्ने प्रयास गर्छन्।
मानिलिउ“m, हामीसँग एउटा यस्तो बैँक खाता छ, जसमा हरेक दिन कसैले १ हजार ४ सय ४० रुपियाँ जम्मा गरििदन्छ। तर, सर्त के भने त्यो रकम हामीले त्यही दिन खर्च गर्नैपर्छ। अर्को दिन हुनासाथ अघिल्लो दिनको रकम भुस हुन्छ र नयाँ १ हजार ४ सय ४० रुपियाँ जम्मा हुन्छ। त्यसो भएमा त्यो रकम के गर्नुहुन्छ भनेर कुनै पनि मान्छेलाई प्रश्न गर्ने हो भने हरेक मान्छेले त्यो रकम त्यही दिन निकालेर प्रयोग गर्छु नै भन्छ। एक दिनमा १ हजार ४ सय ४० मिनेट हुन्छ। हाम्रो एक मिनेटलाई एक रुपियाँ बराबर मात्र मान्ने हो भने हामी सबैलाई प्रकृतिले त्यस्तै खाता दिएको छ। यो कुरा बुझेर पनि हामी त्यसको सदुपयोग गर्दैनौँ भने हामीभन्दा मूढ कोही हुन सक्दैन। दुर्भाग्यको कुरा त के भने समयको यति ठूलो दुरूपयोग गरेर पनि हामीले चेतेका छैनौँ। समग्रमा, राष्ट्रको एकमुष्ठ हिसाब गर्ने हो भने हामी दिनदिनै कति धेरै गरबि हुँदै गइरहेका छौँं भन्ने कुरा कसैले सोचेका छौँ ?
त्यही बानीले गर्दा हामीकहाँ कहिल्यै कुनै कार्यक्रम भनेको समयमा सुरु हुँदैन, भनेको समयमा अन्त्य हुँदैन। हवाई उडान, बस छुट्ने, बैठक, गोष्ठी, भेला, चुनाव, कुर्सी बाँडफाँट, सरकार गठन, निर्णय, बजेट, निर्माण कार्य, विकास योजना र कुनै पनि कुराको कार्यान्वयन कहिल्यै पनि भनेको समयमा हुँदैन। पासपोर्ट प्रकरण र संविधान निर्माण यस कुराको अहिलेको बेलाको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो। प्रधानमन्त्रीको चुनावका नाममा भइरहेको नांगो नाचको पनि कुरा गर्ने हो भने त्यसका लागि कति बहुमूल्य समय नाश भएको छ, त्यसको हिसाब कसले माग्ने, कसले दिने र जिम्मेवारी कसले लिने हो, थाहा छैन। राजधानीका रात्रिकालीन रेस्टुराँहरूमा हुनेभन्दा बढी असामाजिक, राष्ट्रघाती र अश्लील सामूहिक नग्न नाच त हामीले चुनेर पठाएका हाम्रा तथाकथित जनप्रतिनिधिहरूले दिनको उज्यालोमा नै महिनौँदेखि देखाइरहेका छन्। तर, त्यो बन्द गर्ने/गराउने कुनै रमेश खरेल यस मुलुकमा छैन। हामी नेपाली जनता भनेको त साह्रै धेरै धैर्यवान्, दयालु र माफी दिन सक्ने सहनशील प्राणी हौँ। हामीलाई पशुपतिनाथले यस देशको रक्षा गरेका छन् भन्ने कुरामा चाहिनेभन्दा बढी विश्वास छ र हामी सबै चीज सहेर पनि आँखा बन्द गरेर रातीराती ढुक्कसँग निदाउन सक्छौँ।
एक जना महात्मा र बिच्छीको प्रसंग यहाँनिर उल्लेख गर्नु उपयुक्त होला। नदीमा स्नान गर्न लाग्दा महात्माले एउटा बिच्छी देखे। पानीमा डुब्न लागेको त्यो बिच्छीलाई किनारामा राख्नका लागि उनले अञ्जुलीमा उठाए। तर, बिच्छी उनलाई डसेर फेर िपानीमा पस्यो। महात्माले पुनः त्यसलाई निकाल्न खोज्दा फेर िडसेर त्यो पानीमा पस्यो। यो क्रम निकैबेर चलिरह्यो। महात्मा त्यसलाई निकाल्न नछोड्ने, बिच्छी उनलाई डस्न नछोड्ने। अलि परबाट त्यो देखिरहेको एउटा माझीले सोधेछ, "हे महात्मा ! बिच्छी हो, डस्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि तपाईं किन बारम्बार यो निरर्थक प्रयास गर्नुहुन्छ ?"
महात्माले उत्तर दिए, "यसको धर्म डस्नु हो, डस्छ। मेरो धर्म यसलाई बचाउने प्रयास गर्नु हो, म गर्छु। हामी दुवै आ-आफ्नो धर्म निर्वाह गररिहेका छौँ।"
अहिले हामी पनि महात्माको धर्म निर्वाह गररिहेका छौँ। थाहा छैन, कहिलेसम्म हामी बिच्छीको डसाइ खप्दै तिनलाई पानीबाट निकालिरहन सक्छौँ ! यदि हामीले 'भाग्यनिर्माता'हरूलाई उनीहरूको एक मिनेटको भाउ उनीहरू स्वयंले नै कति लगाउँछन् र त्यसैको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि उनीहरूले हामीलाई कति गरबि बनाइसके भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। के उनीहरूमध्ये कसैले हामी जनताको आँखामा हेरेर त्यसको हिसाब दिन सक्छन् ?
August 15, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
केही दिनअघि एक जना परििचतले आफ्नो छोराले प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको कुरा मित्रहरूलाई उत्साहित र उत्तेजित स्वरमा सुनाउँदै साखिनी कुखुरा काटेर खुवाउने घोषणा गरे । हुन पनि हो, आफ्नाहरूको उपलब्धिमा, सफलतामा खुसी हुनु मानवीय स्वभाव हो । खुसी भएपछि त्यसलाई मन मिल्ने मान्छेहरूसँग बाँड्दा दोब्बर हुन्छ । तर, यहाँनिर उदेकलाग्दो प्रश्न के हो भने हामी हाम्रा खुसीहरूलाई किन अर्को प्राणीको ज्यान मारेर मासु खाने कुरासँग जोड्ने गर्छौं ? खुसी हुनु र त्यसलाई बाँड्नुको मासु खानुसँग के सम्बन्ध छ ? बिनामासु खुसी, उत्सव र उमंग अधुरो हुन्छ भन्ने हामीलाई किन लाग्छ ? खुसीको पनि स्तर अनुसार कुन प्राणी काटिन्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण हुन्छ । अघि उल्लेख गरेका मान्छेको उपलब्धिको नै कुरा गर्ने हो भने सायद उनका छोराले द्वितीय श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए ब्रोइलर कुखुरा मात्र काटिन्थ्यो, विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको भए खसी ढल्थ्यो । नेपालभरमिा सबैभन्दा बढी अंक आएको भए सम्भवतः कुनै राँगोको ज्यान जान्थ्यो होला । मासु हाम्रो आतिथ्य सत्कारको अभिन्न अंग भइसकेको छ । अचेल मात्र हो, बाहुनहरूको बिहे-ब्रतवन्ध र छोरीको बिहेमा पनि मासुका परकिारहरू सजिन थालेको । नत्र केही वर्षअघिसम्म पनि बाहुनको भोजमा मासु हुँदैन भनेर नजाने मान्छेहरूको कमी हुँदैनथ्यो । कसैको जमघटमा मासुका परकिार भएनन् भने त्यहाँ पाहुनाहरूले अहिले पनि नाकमुख खुम्च्याउन छोडेका छैनन् । कुनै विशेष कारणले मासु नखाने वा नपाइने दिनमा पाहुना नबोलाएर मासु खाने दिनसम्म कुर्ने प्रचलन छ हाम्रोे ।
औषधी विज्ञानले प्रमाणित गरसिकेको छ, मांसाहारीभन्दा शाकाहारी मानिस बढी बाँच्छन् । मासु खाएर प्राप्त हुने कुराहरू अरू चीजहरूबाट पनि प्राप्त हुने गर्छन् । मासु पच्नका लागि निकै धेरै गाह्रो हुन्छ र त्यसले अनेकौँ रोगहरू पनि निम्त्याउन सक्छ । हाम्रो पाचन प्रणालीको बनोटको नै कुरा गर्दा पनि यो गाईभैँसी, खसीबोका र अरू शाकाहारी जनावरहरूसँग बढी मिल्दोजुल्दो छ । त्यो बाघ, सिंह, स्याल वा ब्वाँसोजस्ता हिंस्रक मांसाहारी जनावरहरूभन्दा फरक छ । त्यसले के प्रमाणित गर्छ भने प्रकृतिले पनि मानव भन्ने जनावरलाई मासु खानका लागि बनाएको होइन । ती अरू मांसाहारी जनावरसरह बाँच्नका लागि हामीले मासु खानु पर्दैन । हाम्रा हातगोडा तिनका भन्दा फरक बनाइएका कारण सायद हामीले खेतीपाती गर्न सकौँ भनेर हो ।
हाम्रो देशको परपि्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो मासु खाने तरकिा पनि एकदमै अस्वस्थकर छ । न हामीकहाँ स्वस्थकर ढंगले मासु उत्पादनका लागि जनावरहरू पाल्ने कुनै प्रावधान छ, न त मासु ओसारपसार र बिक्रीको कुनै उचित बन्दोवस्त । रक्िसा र टेम्पोमा तपतप आलो रगत चुहाउँदै ओसारएिका राँगाका फाल्साहरू गल्लीगल्लीमा कस्ता पसलहरूमा कसरी बेच्न राखिएका हुन्छन्, त्यो हामी सबैले कहीँ न कहीँ त देखेको नै हुनुपर्छ । खसी र कुखुराका मासुहरू पनि छेवैमा ढल बगिरहेका झीँगा भन्किने पसलहरूमा यति अस्वस्थकर ढंगले पसारएिका हुन्छन्, त्यो देख्दा पनि हामीलाई घीन लाग्दैन भने हामीभन्दा हिंस्रक जनावर अरू कुन होला त ? छालामा सबैभन्दा बढी संक्रमण हुन्छ भन्ने थाहा पाएका पढेलेखेका मानिसहरू पनि छालाबिनाको मासुमा त स्वादै हुँदैन भन्ने कुमान्यता छोड्न सक्दैनन् ।
आदिम युगका मान्छेले बाँच्नका लागि अरू प्राणीको सिकार गर्न सिक्यो । त्यो कला उसलाई प्रकृतिले सिकाएको हुनुपर्छ । त्यस युगका मान्छेलाई प्रकृतिले बाँच्नका लागि अरू थुप्रै कुराहरूको भण्डार पनि सिर्जना गरििदएको छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । विकासको क्रमसँगै मानवले धेरै अरू कुराहरू पत्ता लगाउँदै गयो । रूखहरूमा लटरम्म फल्ने फलहरूका बोक्राहरू जति नै कडा र नमिठा भए पनि तिनलाई छोड्याएपछि त्यहाँभित्र स्वादिष्ट, पौष्टिक र शरीरलाई फाइदा गर्ने गुदीहरू हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन अवश्य पनि मान्छेलाई निकै लामो समय लागेको हुनुपर्छ । हरेक कुराका बीजहरू हुन्छन् र तिनलाई माटोमा रोपेपछि ती फेर िफल्छन् भन्ने कुरा त मान्छेले अझ पछि मात्र सिकेको होला । तर जेहोस्, चौतर्फी विकाससँगै मान्छेले आफ्नो चेतना र विवेक पनि बढाउँदै लग्यो । अरू जनावरभन्दा मानिस श्रेष्ठ हुँदै गयो किनभने मानिसमा प्रकृतिले बुद्धि पनि हालिदिएको थियो । सोच्ने, तर्क गर्ने र कुनै पनि कुराका पछाडि किन र कसरी भन्ने प्रश्न उठाउने अनि तिनको उत्तर फेला नपारुन्जेल चुप नलाग्ने मान्छेको प्रवृत्तिले नै उसको विकास गर्दै लग्यो । विकासक्रमसँगै मान्छेका स्वभावहरू परविर्तन भए, मानसिकता परविर्तन भए, हाउभाउ परविर्तन भए, शरीरका अवयवहरू नै पनि परविर्तन भए तर परविर्तन भएन एउटै कुरा, अर्को प्राणीलाई मार्ने बानी । खानका लागि अरू जनावरहरू मात्र होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित गर्न, राज्य गर्न र नेतृत्व गर्नका लागि मान्छेले मान्छेलाई नै मार्ने कामचाहिँ कहिल्यै पनि छोड्न सकेन । त्यसैले ठूलठूला युद्धहरू भए, लाखौँ मानिस मारएि । कहिले धर्मका नाममा, कहिले देशका नाममा, कहिले विचारका नाममा र कहिले वादका नाममा मानिसहरू अनाहकमा मारएिका थिए, अहिले पनि मारएिका छन्, भोलि पनि मारनिेछन् । अहिंसा परमोधर्म भन्ने उक्ति जति पढे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लगाउन मानिसले कहिल्यै पनि किन सिकेन ? मानिसको यही मासु खाने भोकका कारण नै कतै उसले आफ्नो आदिम पुर्खाहरूको त्यही अविकसित, चेतनाहीन, आक्रामक र हिंस्रक गुण छोड्न नसकेको त होइन ?
विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार जर्ज बर्नाड शाले भनेका छन्, हाम्रो पेट भनेको मरेका जनावरहरूलाई गाड्ने चिहान होइन । उनको योे उद्गार मांसाहारीप्रति लक्षित थियो । भनिन्छ, उनको यो भनाइ पढेर, सुनेर धेरै मान्छे शाकाहारी बनेका छन् । तर पनि हामी शाकाहारी किन बन्न सक्दैनौँ ? यो प्रश्न मैले आफैँलाई पनि बारम्बार गर्ने गरेको छु ।